Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukuzivumelanisa ne-'First Girl Support Group 'eMisebenzini noCharlize Theron, uMuschiettis
by Waylon Jordan July 19, 2021 1,098 ukubukwa
Inoveli kaGrady Hendrix Iqembu Lokugcina Lamantombazane ibekwe ekuthuthukisweni njengochungechunge ku-HBO Max. Ukuzivumelanisa nezimo kungumsebenzi ohlangene phakathi kweCharlize Theron's Denver & Delilah Films ngokubambisana ne-Double Dream ne-Aperture Ventures ka-Andy noBarbara Muschietti.
Amazwibela asemthethweni encwadi athi:
ULynnette Tarkington uyintombazane yokugcina eyasinda ekubulaweni kwabantu. Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi ahlangana namanye amantombazane amahlanu okugcina kanye nodokotela wabo eqenjini lokusekela labo abasinde kokungacabangi, basebenzela ukuhlanganisa izimpilo zabo. Bese kuthi omunye wesifazane aphuthe umhlangano, bese kuthi ukwesaba kwabo okubi kakhulu kufezeke — omunye umuntu uyazi ngeqembu futhi uzimisele ukuphinda ahlukanise izimpilo zabo, iziqephu nezingxenye.
Kepha into emayelana namantombazane okugcina ukuthi noma ngabe izingqinamba zimbi kangakanani, ubusuku bumnyama kangakanani, ummese ubukhali kangakanani, abasoze bancama.
Le ncwadi isanda kufika emashalofini, kepha ibivele idala ukuheha kubalandeli bezindaba eziqanjiwe ezesabekayo. Lokhu kungukuguqulwa kwamuva kwenye yamanoveli kaHendrix. Kwakhe Umhlahlandlela weSouthern Book Club weSlaying Vampires usanda kuthathwa yizitudiyo ze-Amazon, kanye noveli yakhe, Ukukhipha Umngani Wami Okukhulu izofika maduze ivela kuleso situdiyo.
UTheron uzosebenza njengomkhiqizi omkhulu kulo msebenzi kanye noMuschiettis. U-Andy Muschietti naye uzimisele ngokuqondisa isiqephu somshayeli.
iHorror izokugcina usesikhathini kuzo zonke izindaba zakamuva mayelana nokuzijwayeza njengoba kutholakala.
Ngabe ufundile Iqembu Lokugcina Lamantombazane? Ungumlandeli wezincwadi zikaHendrix? Sazise ukuthi ucabangani kumazwana angezansi!